तत्कालिन जनयु*द्धमा बेपत्ता भएका बिक किरिया गरेको १५ वर्षपछि पत्नीसहित घर फर्केपछि…! – ताजा समाचार
तत्कालिन जनयु*द्धमा बेपत्ता भएका बिक किरिया गरेको १५ वर्षपछि पत्नीसहित घर फर्केपछि…!
काठमाडौं, २३ साउन । तत्कालिन जनयु*द्धका बेला बेपत्ता भएका रुकुम सानीभेरी गाउँपालिका–११ साबिक अर्मा गाविस– ९० का उमेश विश्वकर्माको काजकिरिया गरिसकेको १५ वर्षपछि श्रीमतीसहित घर फर्केका छन् ।
रूकुमको खारामा सरकारी सुरक्षाकर्मी र तत्कालनीन नेकपा माओवादीका ल*डाकुबीच भएको लडाइँका क्रममा बेपत्ता भएका बिक यही साउन १९ गते घर फर्केका हुन् ।
२०६१ सालमा खारा ल*डाइँमा सहभागी भएका उनको अवस्था खुलेको थिएन । उनी घर नआएपछि परिवारले मृ*त्यु भइसकेको भनेर काजकिरिया गरेको थियो । ‘छोराको अवस्थाबारे धेरै खोजी ग¥यौँ, पार्टीले पनि खोज्यो,’ आमा मनकुमारीले भनिन्, ‘ल*डाइँमा गएको छोराको मृ*त्यु भयो होला भनेर हाम्रो परम्परा अनुसार काजकिरिया गरेका थियौं ।
काठमाडौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह थाइल्याण्ड जाने भएका छन् । देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे चासो राख्दै आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र निजी सचिव सागर तिमल्सिनाका साथ भोलि साउन २४ गते शुक्रबार थाइल्याण्डको बैङ्कक जान लागेका हुन् ।